लक’डाउनमा के गर्दै छिन् नायिका रेखा थापा ? – Khabar Patrika Np
लक’डाउनमा के गर्दै छिन् नायिका रेखा थापा ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १०, २०७८ समय: २३:५३:३४
काठमाडौं : कुनै समय नेपली चलचित्र क्षेत्रमा एकक्षत्र राज गरेकी नायिका रेखा थापाको नायिकाका रुपमा फिल्मी क्यारियर अहिले ओरालो लाग्दो अवस्थामा छ ।
रेखाका पछिल्ला तीन फिल्म ‘मालिका’, ‘रुद्रप्रिया’ र ‘पलाँस’ले राम्रो व्यापार गर्न सकेनन् । मालिका र पलाँसले त पानी पनि नमागी फ्लप भएपछि उनको ‘फिल्म राम्रो बनाउछु’ भन्ने आत्मविश्वास सप्रमाण बेकार भएको भने छैन ।
नेपालका वरिष्ठ पत्रकारहरुले रेखालाई हिरोइन नभएर ‘हिरो’ हुन् र ‘उनका स्टारडमले फिल्म चल्छ’ भन्ने गरेका कयौं उदाहरण छन् । र नायिका रेखा थापा त्यसलाई सत्य साबित गर्न कहिल्यै पछि हटेकी छैनन् । यानेकि रेखा थापा अहिले पनि ठूलो आशामा उनले निर्माण गरेको चलचित्रले नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीजमा केही जादु गर्ने छ भन्नेमा ।
स्रोतका अनुसार ल’कडाउनमा रेखा थापा आगामी चलचित्र र त्यसको योजनामा रहेको बताइएको छ । आफुलाई अहिले पनि सफल नायिका तथा निर्माताको रुपमा प्रमाणित गर्न नायिक रेखा थापा ठूलो बजेटमा काम गर्दै गरेको अपुष्ट समाचार समेत स्रोतले बताउदै आएको छ ।